ခဈြခွငျးဖွငျ့သာ ခညျြခဲ့တာပါ – Shinyoon
ခဈြခွငျးဖွငျ့သာ ခညျြခဲ့တာပါ ။
လူတဈယောကျကို ခဈြမိလာတာနဲ့အမြှ အနောကျမှာ ပိုငျဆိုငျခငျြတဲ့ အတ်တတှေ ကပျပွီးပါလာတတျတာ သဘာဝတှထေဲက သဘာဝတဈခုပါ ။ ဒီအထဲမှာမှ ပိုပွီး ခဈြမိတဲ့သူ ပိုပွီး အဆုံးရှုံးမခံနိုငျတာက ပိုပွီးသာတာပေါ့
အခဈြ . . . ပေးဆပျခွငျးလို့ အဓိပ်ပါယျဖွဈကွတဲ့ သူတှလေဲ ရှိတယျ ။ သူ သိသညျဖွဈစမေသိဘူးဖွဈစေ ခဈြနရေခွငျးကသာ အခဈြ လို့ ခေါငျးစဥျတပျကွတဲ့ သူတှလေဲ ရှိတယျ ။ ကြှနျမ ခံယူခကျြတော့ အတ်တ နဲနဲဆနျကော ဆနျနိုငျပါတယျ ။ သို့သျော . . . ကိုယျခဈြရ ကွငျနာရတဲ့ သူကို ဘ၀ထဲက ထှကျမသှားစခေငျြတာတော့ လူတိုငျးနဲ့ ခံစားခကျြခငျြးတူမှာပါ ။
ဒါပမေယျ့ ကြှနျမ သူ့အပျေါ ခဈြခွငျးမတ်ေတာ တဈခုတညျးနဲ့ ခညျြခဲ့မိတာပါ ။ မိနျးမ မာယာဆိုတဲ့ အရာကို ကြှနျမ မသိနားမလညျခဲ့သလို ကြှနျမ ထုတျပွီးတော့လဲ မသုံးတတျခဲ့ဘူး ။ စိတျထဲမှာ ရှိတဲ့အတိုငျး ကိုယျခံစားခဲ့ရတဲ့အတိုငျး ဘာမုသားမှ မပါပဲ အရိုးသားဆုံးလေး ၀နျခံခဲ့မိတာပါ ။ ကြှနျမမှာ အားနညျးခကျြတှေ ရှိလာတဲ့အခါ လမျးပွလမေလားဆိုတဲ့ စိတျလေးနဲ့ ၀နျခံခဲ့မိတယျ ။ ကြှနျမမှာ အမှားတှေ ရှိလာတဲ့အခါ မာနတှမေထားပဲ တောငျးပနျခဲ့မိတယျ ။
အခဈြကို ကိုးကှယျတတျတဲ့ မိနျးမ မဟုတျပမေယျ့ အခဈြနဲ့ ပတျသကျရငျ နဲနဲလေးတော့ အကဲပိုတတျပါတယျ စိတျပူတာ စိတျမခတြာ တှလေဲ ပိုတယျ ။ ဒါပမေယျ့ . . .အဲ့ဒီစိတျပူတာတှေ စိတျမခတြာတှအေနောကျမှာ ဆုံးရှုံးရမှာကွောကျတဲ့ စိတျလေးတဈခုတညျးပဲ ရှိခဲ့တာ ကနျြတဲ့ အရာတှေ ဘာဆိုဘာမှ မရှိခဲ့ဘူး ။
ကြှနျမ . . . ခဈြခွငျးနဲ့ပဲ ခညျြခဲ့တာပါ ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျမ ခဈြခွငျးတှကေို နားမလညျခဲ့တဲ့ လူနဲ့ပဲ ဆုံခဲ့တာကလဲ ကံကွမ်မာပါ ။ အတ်တ ကွီးလိုကျတာ နရောတကာ ပါတယျဆိုတဲ့ ခေါငျးစဥျတှတေပျပွီး မငျးကိုတော့ နားမလညျနိုငျတော့ဘူးဆိုတဲ့ စကားလုံးတှေ အနောကျမှာ အမွဲ အခဈြရေးကံမကောငျးတတျတဲ့ ကောငျမလေးတဈယောကျပေါ့ ။ ဒီအတှကျ ၀မျးမနညျးမိသလို ဘာနောငျတမှ လဲ မရှိခဲ့ပါဘူး ။ ကြှနျမ ဘ၀မှာ ကိုယျ့ဘကျက တတျနိုငျသလောကျ ဖွူစငျခဲ့သလို ကိုယျပေးနိုငျတဲ့ မတ်ေတာတှလေဲ ပေးခဲ့ဖူးပါတယျ တဈဖကျက . . . နားလညျတာ နားမလညျတာ ယူတတျတာ မယူတတျတာကတော့ . . . ကြှနျမနဲ့ သကျဆိုငျတဲ့အရာ မဟုတျတော့ဘူးလေ ။
ချစ်ခြင်းဖြင့်သာ ချည်ခဲ့တာပါ ။
လူတစ်ယောက်ကို ချစ်မိလာတာနဲ့အမျှ အနောက်မှာ ပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့ အတ္တတွေ ကပ်ပြီးပါလာတတ်တာ သဘာဝတွေထဲက သဘာဝတစ်ခုပါ ။ ဒီအထဲမှာမှ ပိုပြီး ချစ်မိတဲ့သူ ပိုပြီး အဆုံးရှုံးမခံနိုင်တာက ပိုပြီးသာတာပေါ့
အချစ် . . . ပေးဆပ်ခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ကြတဲ့ သူတွေလဲ ရှိတယ် ။ သူ သိသည်ဖြစ်စေမသိဘူးဖြစ်စေ ချစ်နေရခြင်းကသာ အချစ် လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ကြတဲ့ သူတွေလဲ ရှိတယ် ။ ကျွန်မ ခံယူချက်တော့ အတ္တ နဲနဲဆန်ကော ဆန်နိုင်ပါတယ် ။ သို့သော် . . . ကိုယ်ချစ်ရ ကြင်နာရတဲ့ သူကို ဘ၀ထဲက ထွက်မသွားစေချင်တာတော့ လူတိုင်းနဲ့ ခံစားချက်ချင်းတူမှာပါ ။
ဒါပေမယ့် ကျွန်မ သူ့အပေါ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ တစ်ခုတည်းနဲ့ ချည်ခဲ့မိတာပါ ။ မိန်းမ မာယာဆိုတဲ့ အရာကို ကျွန်မ မသိနားမလည်ခဲ့သလို ကျွန်မ ထုတ်ပြီးတော့လဲ မသုံးတတ်ခဲ့ဘူး ။ စိတ်ထဲမှာ ရှိတဲ့အတိုင်း ကိုယ်ခံစားခဲ့ရတဲ့အတိုင်း ဘာမုသားမှ မပါပဲ အရိုးသားဆုံးလေး ၀န်ခံခဲ့မိတာပါ ။ ကျွန်မမှာ အားနည်းချက်တွေ ရှိလာတဲ့အခါ လမ်းပြလေမလားဆိုတဲ့ စိတ်လေးနဲ့ ၀န်ခံခဲ့မိတယ် ။ ကျွန်မမှာ အမှားတွေ ရှိလာတဲ့အခါ မာနတွေမထားပဲ တောင်းပန်ခဲ့မိတယ် ။
အချစ်ကို ကိုးကွယ်တတ်တဲ့ မိန်းမ မဟုတ်ပေမယ့် အချစ်နဲ့ ပတ်သက်ရင် နဲနဲလေးတော့ အကဲပိုတတ်ပါတယ် စိတ်ပူတာ စိတ်မချတာ တွေလဲ ပိုတယ် ။ ဒါပေမယ့် . . .အဲ့ဒီစိတ်ပူတာတွေ စိတ်မချတာတွေအနောက်မှာ ဆုံးရှုံးရမှာကြောက်တဲ့ စိတ်လေးတစ်ခုတည်းပဲ ရှိခဲ့တာ ကျန်တဲ့ အရာတွေ ဘာဆိုဘာမှ မရှိခဲ့ဘူး ။
ကျွန်မ . . . ချစ်ခြင်းနဲ့ပဲ ချည်ခဲ့တာပါ ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ ချစ်ခြင်းတွေကို နားမလည်ခဲ့တဲ့ လူနဲ့ပဲ ဆုံခဲ့တာကလဲ ကံကြမ္မာပါ ။ အတ္တ ကြီးလိုက်တာ နေရာတကာ ပါတယ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေတပ်ပြီး မင်းကိုတော့ နားမလည်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေ အနောက်မှာ အမြဲ အချစ်ရေးကံမကောင်းတတ်တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပေါ့ ။ ဒီအတွက် ၀မ်းမနည်းမိသလို ဘာနောင်တမှ လဲ မရှိခဲ့ပါဘူး ။ ကျွန်မ ဘ၀မှာ ကိုယ့်ဘက်က တတ်နိုင်သလောက် ဖြူစင်ခဲ့သလို ကိုယ်ပေးနိုင်တဲ့ မေတ္တာတွေလဲ ပေးခဲ့ဖူးပါတယ် တစ်ဖက်က . . . နားလည်တာ နားမလည်တာ ယူတတ်တာ မယူတတ်တာကတော့ . . . ကျွန်မနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့အရာ မဟုတ်တော့ဘူးလေ ။